Yintoni ekumele ikwazi ukuyenza umgcini-mhlaba wokuqala kunye nokwazi ukwenza?
I-brand new knapsack, ifomu elixinzelelweyo, iipenisi ezibukhali kunye neepenki ezimnandi kwimeko yecencil. Yonke into ilungele isikolo! Ihlobo liza kufika ekupheleni, kwaye abafana kunye namantombazana baya kuhamba esikolweni kungekudala. Amawaka e-graders yokuqala, ahlasele ngokungapheliyo, acinezela ngokuqinileyo ngesandla sakhe somzali, uya kuhamba phambili kwindawo yokuphila, aze ahlale kwiidesiki. Ngaphambili, umntwana ongena kwiklasi yokuqala kufuneka akwazi ukufunda ngeellabble (nangona athathe abo bangenako), balala kwishumi nangemva, uyazi ngentliziyo ethile imbongo. Ngoku umfanekiso ushintshile. Abantwana bafumana ezininzi iingxaki zokuvavanya, iimvavanyo, udliwano-ndlebe. Kodwa zonke iinkxalabo ezinxulumene nokuvavanywa zingasemva, kwaye wena kunye nosana lwakho uhlala kulindeleke ngoSeptemba 1. Mxelele malunga nobuntwaneni bakho, khumbula amabali amnandi. Oko i-future-grader kufuneka yayazi kwaye iyakwazi ukuyenza-malunga nale nto kwinqaku lethu.
Bonisa iifoto zesikolo uze uxele ngobomi bakho besikolo kunye nabafundi ofunda nabo. Ukuqinisekisa ukuba umfundi wonyaka wokuqala uya kulungiswa ngakumbi kunye nezinguqu ezizayo, musa ukumkhusela ekulungiseleleni ifomu nokuthenga izikolo nokubhala. Kuya kuba kuhle kangakanani umntwana ukuba akhethe ityala lepencil ngeSkrek, idayari kunye nama-pirates kunye neencwadi zokufunda nge-Spider-Man! Emva koko, ukufunda kunye nabalinganiswa bakho abathandayo kunomdla ngakumbi. Ukuqokelela iphothifoliyo ngexesha lokuqala kuya kufuneka ukuba ube nomntwana, kuba abaqalayo-galada bazama ukudubula apho kunye neencwadi kunye neencwadi ezingenakudinga namhlanje. Ukutya kwasekuseni, utshintshe izicathulo, amathoyizi athile ozithandayo, aqhelekanga avunyelwe ukuzisa esikolweni. Kwimeko apho, nxibelelana notitshala ngale nto. Ukuba ngaba iphothifoliyo yenzeke ukuba ingenakubekezeleka, unokuxoxa kunye notitshala ukuba awukwazi ukuqhuba zonke iincwadi, okanye ngabazali bommelwane wakho kwideskiti - ukuthatha isigamu seencwadi zezifundo.
Iholide yokuQala yokuqala
Kwiholide yeyokuqala umnxeba akayi kuba yinto eqhelekileyo, kufuneka kukhunjulwe ixesha elide. Ukuba yonke iklasi esikolweni ayimakwanga, abazali kufuneka banakekele oku. Le mini kufuneka ibe yintsapho yenkcubeko kwaye "izalise iinqanaba" zemikhosi yasekhaya. Njalo unyaka, gubha iSeptemba 1 kunye nohambo oluya kwi-cafe, uhambo ukuya kwendalo, intlanganiso kunye nabafundi ofunda nabo, njl njl. Ukuhlela iholide akuyona nzima, kubaluleke kakhulu - umnqweno. Iibhisikidi ezincinane kunye neesekese, ulwandle lwe-lemonade okanye ijusi, umculo we-gay, imincintiswano elula, izitya ezilahlayo, iinqwelo, ikhwelo-i-dudels-kwaye nantsi, iholide! Iinkwenkwezi zeqela, eqinisweni, zi-graders zokuqala, kodwa abazali bafanele bathathe inxaxheba kwimincintiswano, bacule iingoma, ngaphandle koko iholide yentsapho ayinakubizwa. Ewe, ukuba intsapho sele isenabantwana besikolo, ngoku sele isiqhelana nomfundi osandul 'ukwenziwa. Yaye ukuba intsapho yakho "iya kwiklasi yokuqala" ngokokuqala ngqa, kuya kuba lula ukuba abantwana abancinci bajoyine ubomi obutsha besikolo. Ukuba abazali bavuka ekuseni kakhulu, unokuza kunye nesithethe esitsha - ukususela namhlanje sivuka kwiwashi ye-alamu. Ixesha kufuneka lanele ukwenzela ukuba kube lula ukugqiba yonke imihla yokusa kunye nokutya kwasekuseni. Ngomntwana, unako ukunika into evela kwiziqhamo, i-pie, ikhuki, ibhokisi yejusi okanye ibhotile yamanzi. Ungakulibali ukuhlamba isiqhamo uze ufake ingxowa ngesidlo sasekuseni. Emva kwesikolo, ngaphambi kokuba uqale izifundo, umqashi wokuqala kufuneka aphumle. Oogqirha baze bathakise ubuthongo bemini kubafundi besikolo esiprayimari.
Ndingenza njani konke?
Ngokwahlukileyo ufuna ukuthetha ngomsebenzi wesikolo. Isifundo sifanele sifundiswe ngumfundi, kwaye akukho nto ngabazali. Umsebenzi wolawulo lwabazali. Kwaye ngokuqhelekileyo kwenzeka njengalokhu: umntwana uvela esikolweni, ulinde kude kube ngokuhlwa ukubuya kumsebenzi nomama kunye noyise, emva kwesidlo kwaye emva koko uhlala phantsi kwizifundo. Ngalesi sikhathi umntwana usekhathele, akasakwazi ukuqonda ulwazi, ngokwemvelo, inkqubo ilibazisekile, kwaye ukuchaneka kokuphunyezwa kuyabuhlungu. Kuya kuba ngcono xa umntwana, ephumle emva kwesikolo, ufunda izifundo, kwaye abazali bajonga ngokuhlwa. Kwaye kufuneka uhlolisise, kuphela umsebenzi, kungekhona ukuchaneka. Lo sele usu msebenzi wootitshala. Yaye ukuba umgcini-mbini wayekwazi ukuhamba ngexesha, i-alamu iya kuhlangula: uyabetha - ixesha lokufunda. Okanye ubeke umntwana "isikhumbuzo" kwifowuni yakho yeselula. Kwaye enye imeko ebalulekileyo. Ekuqaleni kobomi besikolo, umntwana uyalingeka ukuba abhalise kanye kunye kuzo zonke izicwangciso kunye nezibonda, okukuphela kokukufutshane. Kodwa abazali akufanele bawulibale ukuba umthwalo wokuqeqeshwa kunye nokuveliswa kobomi besikolo kufuna amandla amaninzi kunye namandla ukusuka kumgcini wokuqala. Ngoko ke, kufuneka ucinge ngenyameko ngaphambi kokuba uvumele umntwana ukuba ahambe kwiqela lokudansa, kwisikolo somculo okanye kwicandelo lobugcisa bentlalo. Ukuba kunokwenzeka, kungcono ukulinda unyaka ukuba umfundi afunde ukufumana ubomi obutsha, angene kwisigqi sayo, kwaye emva koko ubhale umntwana kwi-studio yobugcisa okanye kwi-studio yezemidlalo.
Indlela yokufundisa umntwana ukuba enze umsebenzi wesikolo?
Umntwana akafuni ukuya esikolweni
Umsebenzi weengcali zengqondo kwisikolo seprayimari
Imidlalo yezemidlalo yangaphandle kwi-kindergarten
USergei Bezrukov waqala ukuxelela inyaniso malunga nabantwana abasemthethweni
Iipilisi zokukhusela i-Jeanine - ukukhulelwa ngomlomo nge-dienogest
Kuliphi ixesha elinokuthi kubekho ukukhulelwa okhatywayo
Ukunyamekela umntwana onempilo
Ukungaxakekanga kwiimpawu ezimnyama: i-Madeindreamland
Inkukhu kwi-sauce e-creamy nge-curry
I-Alimony kubantwana ngaphandle komtshato
Inkomishi yekhofilethi yekhofi kwigugg
Ungondla njani umntwana ukuze akhule kangcono?
Ubongozi bexesha elizayo uNadezhda Meicher
U-Angina kunye nophatho lwayo kubantwana
UBozena Rynska uhluphekile kwiintengiso zakhe
Indlela yokudibanisa i-Lego Constructor
Lasagne kunye nemifuno
I-fried broccoli yenkukhu